Press Release – IMC Myanmar
IMC Myanmar > Press Release
Launching of Financial Training Institute MyAsia-IMCM
Saturday, 26th March 2016, 14:30 – 17:30,
Ballroom (2), Sule Shangri-La Hotel, Yangon, Myanmar.
MyAsia Consulting Co.Ltd, A local JV between Myanmar Locals and Indian Professionals have successfully completed there2years of operations in Myanmar few months back ,Company has launched various IT products and Services through their local strategic partners ,Information Matrix & Win Thin Associates ,MyAsia has also provided various consulting services to many foreign companies to set up their ventures/Representative offices in Myanmar which includes Banks ,insurance companies ,Telecommunication service companies & Training Institutes .We are also providing management services , other services like ISO Certification & Environmental Impact Assessments.
IMCM is granted full membership of overall 50 members of the International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI). IMCM: The Institute of Management Consultants Myanmar Co., Ltd. Is the country representative Institute of ICMCI and granted to organize Certified Management Consultant Program in Myanmar. We provide CMC: Certified Management Consultant Assessment, Educational Services for training programs in the different areas for open entry and tailor-made, HR System Development and OD, Facilitation TOT, MBA in Business Management.
MyAsia –IMCM (A local Training Partner) has recently awarded by Government of Myanmar to startaGovernment Recognised Financial Training Institute ,our objective is to provide quality training services to the entire Industry ,we have in house experts who holds decades of hands on experience working in top levels for Banks ,Insurance Companies and in other financial institutes ,Further we have collaborated with “ Gems Skills “ as Intellectual Partners ,aleading International reputed Brand head quartered in United Kingdom to provide financial Training in Myanmar ,Gems Skills has its global presence in various countries which Include US ,Middle East ,Africa ,Asian countries .Gems Skills isapart of Gems Education the global leader in K-12 school education present in 19 countries.
The Dawn of New Industrial revolution in Myanmar which would be fuelled and catalysed by effective training, asacountry is in need of quality training centres across all levels ,we are quite optimist that there isahuge opportunity for training in Myanmar financial Market and we being holding such vast experience we are hopeful to justify in providing this services to our clients and we will ensure clients get the value for their spends ,we will be getting trainers from international markets to train local trainers and we will provide this services through MyAsia-IMCM in Myanmar, we train to transform.
Financial Training Institute အား (MyAsia-IMCM) မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း အခမ်းအနား
၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၆ရက်။ ၁၄း၃၀ နာရီမှ ၁၇း၃၀ နာရီအထိ
Ballroom (2)၊ Sule Shangri-La Hotel၊ ရန်ကုန်မြို့။
MyAsia Consulting ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မြန်မာဒေသခံများနှင့် အိန္ဒိယပညာရှင်များအကြား ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်လျက်ရှိသော အောင်မြင်စွာဖွဲ့စည်းထားသည့် ဒေသခံ JV တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂နှစ်ကျော် လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဒေသခံအရေးပါသည့် မိတ်ဖက်များဖြစ်သော Information Matrix & Win Thin Associates မှတစ်ဆင့် အမျိုးမျိုးသော IP ပစ္စည်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ် ငန်းများကို ဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိသည်။ MyAsiaသည် နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီပေါင်း များစွာတို့အား ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများ (Ventures)၊ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်ရုံးများ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ဘဏ်များ၊ အာမခံကုမ္ပဏီများ Telecommunication လုပ်ငန်း ၀န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများနှင့် သင်တန်းကျောင်းများ (Training Institutes) အပါအ၀င်တို့အား အမျိုးမျိုးသော အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းများ၊ ISO လက်မှတ်ထုတ် ပေးခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း (EIA) ကဲ့သို့သော ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများလည်း ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။
MyAsia သည် ဒေသခံမိတ်ဖက်ဖြစ်သော Institute of Management Consultants Myanmar (IMCM) နှင့် ပူးပေါင်းကာ MyAsia-IMCMအမည်ဖြင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရအသိအမှတ်ပြု Financial Training Institute အဖြစ် Securities and Exchange Commission of Myanmar (SECM) မှ Dr. Maung Maung Thein, Chairman of SECM, Deputy Finance Minister-Union of Myanmar မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
IMCMသည် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော UNDP ၊ International Chamber of Commerce တို့မှ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် The International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) ၏ ၅၀ မြောက်အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ နိုင်ငံများစွာတွင် အသိအမှတ်ပြုသော CMC: Certified Management Consultants ကို မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၄ဦး အား သင်တန်း ပို့ချ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး Certificate Courses များအဖြစ် Leadership and Management, HR, Finance, Facilitation TOT အစရှိသော သင်တန်းအမျိုးမျိုးနှင့် Management Consultant ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
MyAsia-IMCM ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လုပ်ငန်း တစ်ခုလုံးအတွက် အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော သင်တန်း ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများပေးရန်ဖြစ်သည်။
MyAsia-IMCM ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍ တစ်ခုလုံးအတွက် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော သင်တန်းများပို့ချပေးရန် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဘဏ်များ၊ အာမခံကုမ္ပဏီများနှင့် အခြားသော ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အဆင့်မြင့်ရာထူးများတွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ လက်တွေ့လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် နေသည့် လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံရှိသော ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း ကျွမ်းကျင်သူပေါင်းများစွာ ရှိသည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော United Kingdom တွင် အခြေစိုက်သည့် “Gems Skills” ကဲ့သို့သော Intellectual Partner များနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို ပို့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။ Gems Skills သည် ကမ္ဘာတစ်လွှား အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိက နှင့် အာရှတိုက်ရှိ နိုင်ငံများအပါအ၀င် နိုင်ငံပေါင်းများစွာတွင် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ အခြေခံပညာရေး K-12 ကျောင်းပညာရေး လုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံပေါင်း ၁၉ နိုင်ငံတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကမ္ဘာ့ရှေ့ဆောင် Gems Education ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍသစ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော အရည်အသွေး ပြည့်ဝသည့် သင်တန်းများကို အဆင့်တိုင်းအတွက် လိုအပ်နေချိန်တွင် သင်တန်းများ ထိရောက်စွာ ပို့ချပေးခြင်းဖြင့် ထပ်လောင်းအားဖြည့်ပေးပြီး အပြောင်းအလဲကို အထောက်အကူပြုစေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေး ဈေးကွက်တွင် ကြီးမားသော အခွင့်အလမ်းများ ရှိနေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျယ်ပြန့်သည့် အတွေ့အကြုံများဖြင့် ဈေးကွက် လိုအပ်ချက်ကို အပြည့်အ၀ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဟု အကောင်းမြင်ဘက်မှ ယုံကြည်ထားသည်။ သင်တန်းတတ်ရောက်သူများ အနေဖြင့် ၄င်းတို့ သုံးစွဲလိုက်သော ငွေကြေးအတွက် တန်ဖိုးအပြည့်အ၀ ပြန်လည်ရရှိစေမည် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်မှ သင်တန်း ပို့ချသူများကို ဖိတ်ခေါ်ကာ ပြည်တွင်း သင်တန်းပို့ချ သူများအား လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးမည် ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်တွင်း သင်တန်းဆရာများက ဤ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို MyAsia-IMCM မှ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၆မှ စတင်ပြီး သင်တန်းများ ပို့ချပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြောင်းအလဲ တစ်ခု ဖော်ဆောင်ရန် အတွက် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်သည်။